Strategy First University Marketing and Brand Management – Strategy First University
2. Brand and Marketing Communications
4. Ethics & Contemporary in Marketing ​
Lecturer : U Aung Pyae, Myanmar Country Head (True Digital Group) ,MSc. Marketing (Heriot Watt University)
ကုမ္ပဏီများအတွက် အရေးအပါဆုံး အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မားကတ်တင်းအခြေခံ သဘောတရာများဖြစ်သည့် မားကတ်တင်း Planများရေးဆွဲခြင်း၊ မားကတ်တင်း နည်းဗျုဟာ များ ချမှတ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး customer များ လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန် များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ Brand Strategy ချမှတ်ပုံတွေ၊ Brand Management တည်ဆောက်ပုံ၊ Branding Plan ချမှတ်ပုံ၊အကဲဖြတ်ပုံတွေ စသဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ Brand Positioning တွေ Statement တွေကိုထိရောက်သော Marketing နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ပြီး စားသုံးသူများနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအပြင် ယခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုမိုအရေးပါလာတဲ့Digital Strategy ရဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့် Digital Media တွေဖြစ်တဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ၊ ဝက်ဆိုဒ်တွေ၊ အွန် လိုင်းရုပ်သံတွေသုံးပြီး Customer Engagement ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပုံတွေ၊ Market Information Research နဲ့ Digital Campaign လုပ်ဆောင်နည်းတွေကိုပါလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မားကတ်တင်းပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော မားကတ်တင်းမန်နေဂျာများ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာဒီဂျစ်တယ်ပိုင်းမှာ လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ မီဒီယာပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားသူများနဲ့ မားကတ်တင်းပိုင်း စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ အတန်းများကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအတွက်အထူးသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် တက်ရောက်နိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
-Various concepts of marketing
– Elements of marketing environment
– Customer and business buyer behaviors
– Marketing information system
– Business portfolio analysis models
– Designing Marketing strategy
– Integrated marketing mix
– Product and services decisions
– Product life cycle management & New product development process
Module2– Brand and Marketing Communications
– Cultural, social and psychological factors affecting consumer behaviours
– Organisational buying behaviour
– Research methods for marketing decision making
– Branding principles
– Brand architectures
– Rejuvenate and repositioning brands
– 360 brand experience and plan
– Brand communication campaign
– Brand Communications – advertising and sales promotion
– Integrated Marketing Communication Mix – Personal selling, direct marketing, PR
Module3– Digital Marketing
– Marketing in digital age
– Online micro-environment
– Digital Marketing strategies development
– Digital Tools platform
– Marketing mix in the digital era
– Digital Tools for Customer Relationship Management
– Digital Marketing plan
– Integrated marketing communications campaigns for digital media
– B2B and B2C digital marketing practices
Module4– Ethics & Contemporary in Marketing
– Business ethics and triple-bottom-line
– Social Criticism of Marketing
– Fundamental and Ethical Principles in Marketing
– Sustainable Marketing